कांग्रेस उपसभापति गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी ! | सुप्रीम खबर
कांग्रेस उपसभापति गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी !
२०७७ चैत्र २, सोमवार, ४: ५२PM
काठमाडौं : बालुवाटार जग्गा काण्डमा एक वर्षदेखि विशेष अदालतको फरार सूचीमा रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको छ। अदालतले फागुन २३ गते उनको सुनसरी दुहबी नगरपालिकास्थित निवासमा म्याद तामेली टाँस गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका गच्छदारको घरमा ‘मान्छे फेला नपरेको’ ब्यहोरासहितको म्याद तामेली टाँस गरिएको विशेष प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए। मोरङ जिल्ला अदालतमार्फत विशेषले म्याद तामेलीको पत्र पठाएको थियो। अदालतले गच्छदारलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ। म्याद तामेली टाँसिएको पनि सोमबार ९ दिन बितिसकेको छ। तर, गच्छदार अझै विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।
अघिल्लो लेखमाप्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गाउँपालिकाका कर्मचारीले पाएनन् तलब
अर्को लेखमाइजरायलले पाटन अस्पताललाई दियो स्वास्थ्य उपकरण